Kumaa loo doortay Man of the Match kulankii Chelsea iyo Huddersfield? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kumaa loo doortay Man of the Match kulankii Chelsea iyo Huddersfield?
(12-8-2018) kadib Kulankii xiisaha lahaa ee dhex maray kooxaha Chelsea iyo Huddersfield ayaa waxaa lasoo soo Saaray Magaca Cayaaryahankii ahaa kan ugu fiican garoonka isla Markaana sameeyey dadaalkii ugu badnaa.
Cayaaryahanka dalka France u suurta geliyey in ay ku Guuleystaan koobka aduunyada ee N’Golo Kante ayaa loo doortay in uu ahaa Man of the match kulankaas maadaama uu Cayaaray 90 daqiiqo isla Markaana uu dhaliyey mid ka mid ah Goolashii 3 da ahaa ee ay Guusha ku qaadatay kooxdiisa Chelsea.
N’Golo Kante ayaa Sameeyey 53 baas oo aan qaldamin isaga oo kubada taabtay 73 Mar 90 kii daqiiqo ee uu Cayaaray waxaana uu saxay 84.9%, dhamaan shaqadii uu qabtay sidaa ayaa loogu doortay Xiddiga Garoonka dhamaan Cayaartoydii dheeshey.